Umkhuleko wokuthi kubuye i-ex yami. ? Buya nami futhi uthole i-Partner
6 Kufundwa iMin
Umkhuleko wokuba u-ex wami abuye Kungaba wukusindiswa kwethu kuphela kulezo zikhathi lapho ubudlelwane bothando.
Singabuyisela loyo muntu kithi esikhathini esincanyana kunalokho obekulindelwe futhi sonke ngokumane nje sithandaze lokho kwabaningi kubonakala kulula kodwa kunamandla amakhulu.
Ngalo mkhuleko singathola umlingani wethu wangaphambili ukuba aqaphele amaphutha awenzile futhi abuyele ngokudabukisa ngenhliziyo edinga inkampani yethu futhi yilapho lapho sizobona amandla nokusebenza kahle yemikhuleko eyenziwe ngesidingo somphefumulo.
1 Umkhuleko wokuba u-ex wami abuye
2 Thandazela ukuthi ex wami abuye nami
3 Umkhuleko onamandla wokuvuselela umlingani wakho
4 Umkhuleko wokululama umyeni wami
5 Ngingawuthandela nini umthandazo wokuthi u-ex wami abuye?
Lona omunye wemibuzo ebuzwa kakhulu ngabafundi bethu.
Ungaqiniseka ukuthi umthandazo unamandla.
Sizokukhombisa okungenani ama-3 ngezinhloso ezihlukile. Bonke bahlolwa ngamakhulu abantu.
Basebenza ngendlela elula, esheshayo futhi ephumelelayo kakhulu. Vele uthandaze unokholo futhi ukholelwe ukuthi uzogijima kahle.
Thandazela ukuthi ex wami abuye nami
Ukuthi ubuya Ngamandla we-SAN CIPRIANO kanye nama-SOULS amathathu aqaphe iSAN CIPRIANO, i-CJCG manje izofika ngemuva kwami.
I-MVBO uzoza enokwehla Futhi, othandweni, egcwele uthando, ngifisa ukubuya futhi ngixolise ngokuqamba amanga futhi angibuze othandweni futhi kamuva emshadweni ngokushesha okukhulu.
I-SAN CIPRIANO, ngizoba nawo lawo mandla akhohlwa futhi uma eke washiya noma yimuphi umuntu wesifazane osekhanda lakhe bese ebuya ukuzongithatha azazise ukuthi wonke umuntu uyabona.
USAN CIPRIANO kude ne-CJCG noma yimuphi umuntu wesifazane, ukuthi ungifuna ngaso sonke isikhathi, NAMUHLA NAMUHLA, ufisa ukuba ngami, ukuthi une-CERTAINTY YOKUTHI NGINGUMFAZI WESIFUNDAZANE NGAKHE, ukuthi i-CJCG ngeke ihlale ngaphandle kwami ​​futhi i-CJCG njalo Yiba nesithombe sami ekucabangeni kwakho ngaso sonke isikhathi.
MANJE, NGABANI, KUNGANI, NGAPHI
Futhi ngesikhathi sokulala uphupha ngami futhi lapho uvuka ucabanga ngami futhi uyangifuna, lapho udla ucabanga ngami, lapho ungigibela, cabanga ngami, KUZO ZONKE IZIMPAWU ZOKUPHILA KWAKHO CABANGA YAMI.
Lokho kufuna ukungibona, ngizwe iphunga lami, kungithinte NGOTHANDO, ukuthi i-CJCG ifuna ukungiluma, ingange, inginakekele, ingivikele, ingithande amahora angama-24 ngosuku, ngokwenza lokho, ukuthi ingithanda kakhulu nsuku zonke nokuthi izizwa imnandi nje ukuzwa izwi lami
ISAN CIPRIANO yenza i-CJCG ingizwele isifiso esingajwayelekile, njengoba ayengakaze azizwe komunye futhi ngeke azizwe
Ukuthi kukhona injabulo kuphela ngami, ukuthi kunesifiso kuphela kimi nokuthi umzimba wakhe ungowami kuphela, ukuthi unokuthula kuphela uma engiphila kahle.
Ngibonga iSAN CIPRIANO ngokusebenza kimi futhi ngizobe ngidlulisa igama LAKHO ngokukhokhela i-CJCG ebolile futhi ngiyilethe othandweni, uthando, ukuzinikela, ukuzinikela, ukuthembeka nokugcwala izifiso zami.
Ukubuyisa uthando lwethu, uthando lwethu futhi ungishade ngendlela emfishane ngangokunokwenzeka.
Ngiyakucela lokho emandleni ama-SOULS amathathu amnyama abukele I-CIPRIANO. Amen
Lo mkhuleko wokuthi u-ex wami abuye nami unamandla amakhulu.
Ngezikhathi zokuba nenkinga ethile nomlingani wethu, asikaze sicabange ukuthi lokhu kuzoba ukulwa kokugcina, ukuthi ngemuva kwalelo sikhashana impilo yethu izoshintsha ngoba omunye umuntu uthatha isinqumo sokusishiya kungathi akukho lutho.
Into ekhona ukuthi ngalezo zikhathi zokucasuka ngokweqile kwesinye isikhathi asicabangi ukuthi sithini futhi sizithola senza amaphutha amaningi, lawo angenza ubudlelwano buqhekeke.
Kodwa-ke, le nqubo ingasisiza ukuba siqaphele esikwenzile okungalungile futhi njengoba sicela lowomlingani wakhe wokuqala abuyele ebudlelwaneni, into ebalulekile ukukwenza ngokucacisa yonke into nokuthi lo mkhuleko ungasisiza nathi.
Umkhuleko onamandla wokuvuselela umlingani wakho
“U-Santa Helena, ndlovukazi yami ethandekayo, wena owabhekana nosizi lapho wahlupheka khona ngamazipho amathathu, waletha izipikili ezintathu, enye yayindodana yakho uConstantine, enye wamletha emanzini olwandle, ukuze unikeze impilo nokuzivikela kubahambi, manje Ngiyacela ukuthi lo wesithathu anginike, ngikufake enhliziyweni nasengqondweni (yomuntu oyifunayo), ukuze angabi nokuthula enhliziyweni yakhe.
Ngikunika umzimba wami nomphefumulo wami, (igama lomuntu) Woza kimi ngaphandle kokusihlukanisa, ngaphandle kwezihibe, ukuthi ufuna kimi emzimbeni, emphefumulweni, engizobuyela ngilulazekile, ukuthi ngizowela ezinyaweni zami, ukuthi ngizocela ithuba lokuba nami, uSanta Elena angisize.
Saint Elena, kwangathi ukukhanya kwakho kube yikhona okungihola ebumnyameni obuhlungu lobu engibuzwayo, ukuze nsuku zonke kube nguwe ohamba nami, oza othandweni njengokokuqala ngqa ukungibona, ngiyavuma kuwe uSanta Elena Uthando lolu, njengenja.
Ngalo mthandazo onamandla ngidinga ukuthola uthando lwalo muntu, ongithandayo, ukuthi abuyele kimi, ngcwele onamandla, ngicela ukuthi usibone isithombe sothando lwakho, beka lolu thando phambi kwami ​​sisendleleni yethu futhi.
Manje Santa othandekayo ngiyakwethembisa ukuthi uma ungiletha eceleni kwami, ngizoyeka (okuthile okuthanda kakhulu) isonto lonke, ukuze ukwazi ukubona ukuthi uthando engiluzwayo lunamandla, lowo makoti, wethemba wena othandekayo uSanta Elena, wethemba ngokweqiniso futhi ngenhliziyo yami, wethemba wena ndlovukazi yothando, wethemba wena othandekayo, omethembayo othandweni lwethu. ”
Thandaza umkhuleko ukuze ubuyisele umlingani wakho ngokukholwa okuningi.
Ukuthola kabusha umlingani wakho wangaphambili kungaphezu kokukucela ukuthi ubuye ekhaya, kumayelana nokululama ngomqondo wonke wegama. Kwangathi uthando olwalufile kungenzeka luvuselelwe kabusha luqine ngokwengeziwe kunangaphambili.
Ngeke siwenze lo mthandazo ngenxa yobugovu, kusuka esifiso sethu sokuphoqelela komunye umuntu ukuba enze lokho esikufunayo nganoma yini.
Lokhu umthandazo okufanele wenziwe ngenhliziyo ngesandla, okokuqala ukubona lokho thina ngokwethu esikwenzile okungalungile nangokuzimisela ngokuphelele ukuxolisa nokwakha ubuhlobo siqinisekile ukuthi lowo muntu naye uzizwa noma uzimisele ukwenza okufanayo.
Umkhuleko wokululama umyeni wami
Oh Saint Elena wesiphambano, ungangikhohlwa, wena Santa wami, onamandla othandweni, ngiza kuwe ukuzokutshela, ukukubuza nokukucela, ngoba kufanele wazi ukuthi (igama lomuntu) uphume endlini ngoba Omunye umuntu wesifazane, alethe kimi futhi.
Saint Elena, ngenze ngicabange ngomonakalo odale ukuthi ngihambisane nomunye umuntu wesifazane, ngicabanga ukuthi kungokuhle, onakho ngesifiso, ngiyamthanda ngokusuka enhliziyweni yami, amenze abuye kungekudala, amdonsele kimi, angikaze Ungikhohlwe, noma yini engiyenzayo, ungalokothi uyeke ukucabanga ngami.
USanta Elena wesiphambano, uthando engiluzwayo ngaleyo ndoda lukhulu kakhulu, ngamnika ubusha bami, iminyaka engcono kakhulu yempilo yami, ngingumama wezingane zakhe, izinhlungu nosizi enginalo lukhulu kakhulu, uvele avele ukukhululeka lapho ngifika njengewundlu elithobekile futhi ngicela uthando lwami.
Ngiyethemba umkhuleko ka-ex wami nomyeni wami ukuthi babuye emsebenzini.
Umshado ukuzibophezela okucatshangwa phakathi kwabantu ababili kuze kube ukufa kwehlukanise, kepha lokhu kokugcina akuvami ukufezeka ngoba nganoma yisiphi isikhathi ubuhlobo bungawohloka kubangele ukuwohloka kobudlelwano bese kwehlukaniswa kamuva.
Le yinkinga ebilokhu ikhula emphakathini ngisho nakwimibhangqwana engamakholwa.
Kulezi zimo lomkhuleko ungaba wusizo kakhulu ngoba kusivumela ukuthi siphinde silulame lowo mfazinoma ukuthi awufuni ukuqhubeka nobudlelwano.
Emphakathini ofundisa ukuthi okungenamsebenzi kuyalahlwa, kunamandla ukuba nethuluzi ukuze sikwazi ukugcina umshado ngendlela enempilo nenhlalakahle yomzimba nengokomoya isiyonke.
Ngingawuthandela nini umthandazo wokuthi u-ex wami abuye?
Lomkhuleko ungathandazwa noma nini lapho ufuna.
Akunasikhathi sosuku noma isikhathi sesonto.
Okusemqoka wukuthandaza umthandazi ukuze u-ex wami abuye nokukholwa okuningi futhi akholelwe ukuthi konke kuhamba kahle.
Umkhuleko onamandla kuSanta Muerte ukuze othandekayo abuye
Umkhuleko onamandla wokususa iso elibi
Umkhuleko wokungifonela namhlanje